के तपाईलाई थाहा छ ? बाथरोगले गर्छ तपाइको शरीरमा यस्तो असर – Halkhabar kura
३ चैत्र २०७६, सोमबार ११:११
के तपाईलाई थाहा छ ? बाथरोगले गर्छ तपाइको शरीरमा यस्तो असर
काठमाडौं । बाथरोग पनि अहिले धेरैजनाको समस्या बन्मिरहेको छ । जनचेतनाको अभावले बाथरोग ठूलो समस्या बन्दै गएको सम्बद्ध विज्ञहरूले बताएका छन् । यसबारे चेतना अभिवृद्धि नहुँदा तथा खानपानमा ध्यान नपु¥याउँदा यो समस्या बढ्दै गइरहेको छ ।
नेसनल बाथ रोग सेन्टरले लामो समयदेखि बाथरोगबारे गर्दै आएको अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ३० लाख व्यक्ति बाथ रोगबाट पीडित छन् । बाथरोगबारे चेतना फैलाउने काम नभए ठूलो समस्या उत्पन्न हुने सेन्टरको भनाइ छ ।
बाथरोगलाई कतिपयले बेवास्ता गरेकाले पक्षाघातको समस्या देखिन थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतलाई बाथ रोग भएको पाइएको छ । बाथरोगबारे नेपालमा खासै जानकारी नहुँदा पनि समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हो ।
बाथरोगबारे सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले समेत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बाथरोग विशेषज्ञ डा विनित वैद्य बताउँछन् । उनले बाथरोगबारे मानिसहरूलाई त्यति जानकारी नहुँदा पनि भयानक बन्दै गइरहेको जनाए ।
सोही कारण पनि यस विषयमा सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सेन्टरले हाडजोर्नी र गोलीगाँठाको समस्या भएका बिरामीहरूसँग भेटेर कुरा गरी समस्या समाधानतिर लागेको जनाएको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा अधिकांश नागरिकमा बाथरोगको समस्या, उपचार र यसले गर्ने असरका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको सेन्टरले जनाएको छ । हाल सेन्टरले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्दै विपन्न बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचारसमेत गरिरहेको छ ।
अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका ८३ हजार बिरामीको उपचार सेन्टरले गरिसकेको जनाइएको छ । सेन्टरले हरेक वर्ष १५ जना बाथरोगीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ । बाथरोगले हाडजोर्नीमा मात्र नभई शरीरका महत्वपूर्ण अंग मिर्गौला, छाला, नसालगायतमा समेत असर पार्ने जनाइएको छ ।
बाथ रोगका बिरामीलाई फिजियोथेरापी र पोषणका विषयमा समेत पर्याप्त जानकारी दिनु आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । विशेषज्ञ डा वैद्यका अनुसार सेन्टरमा उपचारसँगै बाथरोग पहिचानका लागि अत्याधुनिक प्याथोलोजी र रेडियोलोजी सेवासमेत विस्तार गरिँदैछ
चिकित्सकहरूले रोग पहिचान गरी बाथरोगका बिरामीले समस्याका आधारमा औषधि सेवन गर्नु अत्यावश्यक रहेकाले हाडजोर्नीसम्बन्धी जस्तो समस्या देखिएपनि यससम्बन्धी अस्पताल तथा सेन्टरहरूमा गएर उपचार गराइहाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नत्र यो रोग निकै भयानक हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
सेन्टरले आगामी पाँच वर्ष्भित्रमा देशका मुख्य सहरहरूमा शाखा विस्तार गर्दै जनचेतना फैलाउने जनाएको छ । सेन्टरले हालसम्म काठमाडौंसहित चितवन, रामेछाप, पोखरा, बुटवल, लगायतका १६ वटा जिल्लामा बाथरोगबाट तालिम तथा क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
बाथरोगलाई सामान्यरूपमा लिँदा कतिपयले निकै लामो समयसम्म अपांग जीवन गुजार्दै ज्यान नै गुमाउनु परिरहेको छ । सबै मानिसलाई एकै प्रकारको बाथरोग नलाग्ने भएकाले पनि यसको पहिचानका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान नै हुन जरुरी रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ रहेको छ ।
बाथका लक्षणमा जोर्नी दुख्नु, जोर्नीहरू सुन्निनु, बढी चिसो वा तातो वातावरणमा हड्डी दुख्नु, जोर्नीवरिपरि छालामा निलो वा सेतो डाम देखिनु, हातखुट्टा बाउँडिनु, अनुहारलगायतका स्थानमा मांसपेशीहरू कस्सिनु, छाला नखुम्चिनु, मुख सुक्खा हुनु, निल्दा गाह्रो हुनु, आँखा सुक्खा हुनु, मुख तथा गुप्तांगहरूमा पटक–पटक घाउ खटिरा आउनु, सुक्खा खोकी लागिरहनु, खोक्दा रगत देखा पर्नुलगायत लक्षण भएको सम्बद्ध चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
Next महत्वपूर्ण जानकारी- नेपालमा कोरोनाको आंशका लागे यसरी हुन्छ परीक्षण, डाक्टरको फोन नम्बरहरुसहित, सक्दो शेयर गर्दिनु होला